Iinkonzo zeMveliso | IiNkonzo zeMveliso eziSiko kunye noMenzi
Abasebenzi bendibano yobungcali benza indibano yeemveliso ezigqityiweyo. Ukuveliswa okupheleleyo kuyilo-i-CNC yokusika i-laser / ukusika ilangatye / ukunyathela-ukwenza / ukuguqa-i-CNC machining -i-welding-surface treatment-assembly Hengli inamava kunye nokuguquguquka kokusebenza kunye nabathengi abafuna ukubonakalisa inxalenye. Sithatha ikratshi elikhulu kungekuphela kukuzibophelela kwethu kumgangatho, kodwa nakwirekhodi yethu yokubonelela ngeenkonzo ezisebenzayo nezithembakeleyo zabathengi bethu. Impha yethu ...
IZiko lethu lokuLungiselela lasekwa ekupheleni kuka-2014, malunga nabasebenzi abangama-50, besebenzisa itekhnoloji ye-ERP yolwazi kunye nolawulo lwebhakhowudi ukuqinisekisa ukuchaneka kokugcinwa kweemveliso. Iinkqubo ezenzekelayo zeempahla zisebenza ngokuskena ibhakhowudi kwiindawo. Iskena sebhakhowudi sisetyenziselwa ukufunda ibhakhowudi, kwaye ulwazi olukhowudiweyo yibhakhowudi lufundwa ngumatshini. Olu lwazi lulandelwa yinkqubo yekhompyuter esembindini. Umzekelo, iodolo yokuthenga inokuqulatha uluhlu lwezinto eziza kutsalwa ...
Iworkshop yethu yeWelding ibonelela ngolwakhiwo lwentsimbi kunye nohlobo oluchanekileyo lwentsimbi; Ii-welders eziyi-160 eziqinisekisiweyo, kubandakanya ezinye iintsimbi eziphezulu ezinezatifikethi ze-TUV EN287 / ASME IX, ngaphezulu koomatshini abangama-80 bePanasonic MAG kunye noomatshini abali-15 be-TIG. Ukuqinisekiswa kwe-ISO 3834 ngo-2018. Umboneleli weenkonzo zentsimbi ezenziwe ngokuchanekileyo ukusukela ngo-2002, uHengli Metal Processing unikezela abathengi ngeendleko ezifanelekileyo zezisombululo ngokudibanisa ukusetyenziswa kwethu ...
Imveliso kaHengli isebenzisa oomatshini beplasma be-CNC. Itekhnoloji yokusika iPlasma isenza sikwazi ukusika intsimbi ngobunzima be-1… 350 mm. Inkonzo yethu yokusika iplasma ihambelana nokuhlelwa komgangatho EN 9013. Ukusika iPlasma, njengokucheka ilangatye, kufanelekile ukusika izinto ezinzima. Uncedo lwayo ngaphezulu kokugqibela lithuba lokusika ezinye izinyithi kunye neealloys ezingenakwenzeka ngokusika ilangatye. Isantya sikhawuleze kakhulu kunokusika idangatye kwaye akukho mfuneko ...
Imisebenzi yethu yokupeyinta isekwe kwi-ISO 9001 eqinisekisiweyo: Iinkqubo zoLawulo loMgangatho ze2015. Sinikezela ngenkonzo yokupeyinta emanzi ezizenzekelayo ezihlaziyiweyo, ebandakanya indawo yokuchwetheza ngemichiza ekwi-intanethi, indawo eyomileyo, indawo yokutshiza ye-electrostatic yanamhlanje kunye ne-oveni enkulu yeshishini. Ngokwesiqhelo sipeyinta olu hlobo lulandelayo lweempahla: iinxalenye zoomatshini beshishini, iinxalenye zoomatshini bezolimo, iinxalenye zoomatshini bokwakha kunye nabanye. Iingcali zethu zokupeyinta zimanzi ziya kuzisa umgangatho, ixabiso elifikelelekayo ...